Wararkii ugu dambeeyay ee qaban qaabada shirka Dhuusamareeb & Khayrre oo tababar usoo xirey saraakiil horay uga tirsanaa Ahlu Sunna | Hadalsame Media
Home Wararka Wararkii ugu dambeeyay ee qaban qaabada shirka Dhuusamareeb & Khayrre oo tababar...
Wararkii ugu dambeeyay ee qaban qaabada shirka Dhuusamareeb & Khayrre oo tababar usoo xirey saraakiil horay uga tirsanaa Ahlu Sunna
(Dhuusamareeb) 03 Sebt 2019 – Waxaa magaalada Dhuusamareeb ka soconaya qaban qaabadii ugu dambeeysey ee Shirka Dib u heshiisiinta Galmudug, halkaasoo ay iminka xaadir ku wada yihiin dhamaanba ergooyinkii shirka ka qayb qaadan lahaa.
Waxaa aad loo qaabeeynayay beryahan kaararka aqoonsiga ee shirka lagu gelayo, tirakoobka ergooyinka, dejinka hab-raaca amaanka, iyadoo meelo kala duwan la dhigay ciidamo kala duwan oo ka tirsan DF Somalia.
Waxaa sidoo kale aagag kala duwan la dhigay ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan dalka Jabuuti, kuwaasoo maalmo yar uun jooga Dhuusamareeb, iyagoo ka yimid gobolka Hiiraan.
Shirka ayaa bilaabmaya maalinnimada berritoole oo Arboco ah, bisha Sebtembarna ay 4 ku beegan tahay, waxaana halkaa ku sugan wefdi ballaaran oo uu hoggaaminayo RW Xasan Cali Khayrre oo shirka dartii shalay halkaa u tegey, isagoo shirar badan la qaatay dadka halkaa ku sugan, isla markaana soo afjaray tababar u dhamaaday saraakiil uu halkaa tababar uga socdey oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Somalia.
”DF Somalia waxaa ku waajib ah inay idin siiso wax kasta oo xaqiinna ah, waxaan se rabnaa in uu sarkaal iyo dable kasta joogo meesha loo diray.” ayuu yiri Khayrre.
”Waxaad kasoo wareegteen Ahlu Sunna oo ah urur wax badan soo qabtay, laakiin hadda waxaad ka tirsan tihiin DF Somalia, sidaa darteed, kama wada tirsanaan kartaan laba dhinac, waxaad tihiin saraakiil, sarkaalkuna waa bilowga dowladnimada iyo cidda la eeganayo.” ayuu raaciyay Khayrre oo sheegay in ay muhim tahay inuu qofku u shaqeeyo DF Somalia, si uu xaq ugu yeesho.
Previous article”Somalia waxay Kenya kusoo rogtey cunaqabatayn dhaqaale!” – Muxuu The Star ka yiri dayuuradihii tooska ahaa ee Kismaayo laga joojiyay?!
Next articleKenya oo Somalia ku dacwaysey Golaha Amaanka Midowga Afrika (Shir galabta dhacay + doodda & dood-celinta labada dal)